Tahiry rakitra PDF - pejy 3 amin'ny 11 - fototra afrikhepri
zoma 14 may 2021
Nomen'ny aingam-panahy an'i Ejipta izy io, dia mitondra ampahany betsaka amin'ny heterogen. Ity lahatsoratra an-drenivohitra ity dia matetika antsoina hoe "Korê Kosmou", (na Minerva Mundi amin'ny teny latina), ny fandikan-teny tsara indrindra izay ahitana ...
Ahoana no fanasitranana ny tenanao amin'ny aromatherapy - Fabrocini (PDF)
Aromatherapy dia siansa voajanahary mahavariana sy be pitsiny izay nipoitra efa niandohan'arivony taona maro. Izy io dia tena aingam-panahy tamin'ny fomba nentim-paharazana malaza amin'ny Egyptiana, Persiana, sinoa, ...
Ny Fampianaran'ny Tempoly - Vol 3 (PDF)
Ity volume ity no farany amin'ny andiam-panintonana telo manolotra ireo aingam-panahy mandroso mankany amin'ny tempolin'ny zanak'olombelona. Ny volume 3 dia hiseho ho mpitari-dalana mahasoa amin'ny fandalinana amin'ny ...
Ny vanim-potoana Aquarius (PDF)
Tao anatin'ity asa ity dia nanomboka ny taonan'ny ondrilahy tamin'ny 2160 al.fi, narahin'ny trondro niaraka tamin'ny nahaterahan'i Kristy, raha toa ny vanim-potoanan'i Aquarius ...
Fanombohana ny olombelona sy ny masoandro - Alice Bailey (PDF)
Ny fandraisana an-tanana dia fanitarana ny fahatsiarovan-tena. Ny fiainana dia miaina amin'ny karazana fiainana rehetra. Ny asan'ny planeta planeta planeta dia aseho ato amin'ity boky ity. Ny fitsipika efatra ambin'ny folo dia ...
Fandalinana fanadihadiana momba ny fivavahana (PDF)
Ny fivavahana dia fomba hijerena ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy Andriamanitra. Izy io dia fomba iray anabeazana an'izao tontolo izao sy famaliana ireo fanontaniana lehibe misy. ...
Tantaran'ny ankapobeny ao Afrika - Vol 8 (PDF)
Ny boky valo sy farany momba ny History General Africa of Africa dia mandalina ny vanim-potoana 1935 ka hatramin'izao. Mamantatra ny fivoaran'ny politika, ekonomika ary kolontsaina an ...
Ny bokin'i Enoka (PDF)
Taorian'ny fananana ny Baiboly, ny bokin'i Enoka dia nambara ho heretika tamin'ny taonjato faha-3 satria namolavola tamin'ny antsipirihany toko 6 momba ny genesis izay voalaza hoe ...
Ny hafatra miafina amin'ny rano - Masaru Emoto (PDF)
Mihetsika ny fikarohana izay nataon'ny Dr. Masaru Emoto. Tsapany fa ny rano miampita amin'ny fivoaran'ny teny mahasoa, ohatra "misaotra" na "fitiavana", avelao hiseho ...
World of Fire - Elena Roerich (PDF)
Aorian'ny asa soratra ao am-po, ao amin'ny tontolo malemy, dia tsy maintsy manoratra amin'ny afo isika. Hatraiza ny halaviran'ity tontolo ity ...
Ny zava-kanton'ny ady Sunzi (taonjato faha-475 SM) no fifanarahana paikady voalohany fantatra eto an-tany. Mpahay paikady ara-tafika hatrany am-piandohan'ny vanim-potoanan'ny Ady Miady (221-XNUMX tal ...
Sakafo manohitra ny homamiadana (PDF)
Ity boky ity dia boky ho an'ireo rehetra liana, mivantana na ankolaka, amin'ny homamiadana. Tena ilaina satria, voalohany angamba, dia manome antsika fotoana ...
Ny sora-tanana Nag Hammadi (PDF)
Tamin'ny 1945, na kisendrasendra fotsiny, nisy sora-tanana nanomboka tamin'ny niandohan'ny Kristianisma dia hita tao amin'ny tanàna kely ejipsiana Nag Hammadi. Saingy nanomboka teo, mangina be no nanarona ...
Page 3 ny 11 Avant 1 2 3 4 ... 11 manaraka